लले टोकेका व्यक्ति स्वाइन फ्लु पीडितको सूचीमा - Nepal News - Latest News from Nepal
लले टोकेका व्यक्ति स्वाइन फ्लु पीडितको सूचीमा
१० वैशाख, जाजरकोट । क्यान्सर केयर फाउन्डेशनका तर्फबाट जाजरकोटको लिम्सा स्वास्थ्य चौकीमा पुगेका डा. विवेक सिंहले विहीबार दिउँसो अनलाइनखबरसँग टेलिफोन गरेर एउटा अनौठो दाबी गरे । उनले भने- जाजरकोटको महामारी स्यालहुइँया मात्रै हो ।
जाजरकोट सदरमुकामभन्दा दुई दिन टाढाको गाउँमा रहेका डा. सिंहले भने- ‘जाजरकोटका विषयमा एकदमै गलत सन्देश गइरहेको छ, यहाँ स्वाइनफ्लुले महामारीको रुप लिएको भनिँदैछ, तर, यो सत्य होइन, हामी चिकित्सकहरु गाउँ गाउँमा खटिइरहेका छौं ।’
जिल्लामा जेजति मृतकको संख्या आइरहेको छ, तीमध्ये धेरैको मृत्यु स्वाइन फ्लुका कारणले नभएको सिंहले दाबी गरे ।
‘नायकबाडा गाउँका वीरबहादुर कार्कीलाई स्लालले टोकेको रहेछ, रेबिजका कारण उनको मृत्यु भयो,’ डा. सिंहले भने, ‘तर, उनको निधन स्वाइन फ्लुबाटै भएको भन्ने गलत विवरण टिपाइयो ।’
यद्यपि रेबिज लाग्दा त्यसको उपचार गर्ने प्रविधि गाउँसम्म नपुग्नु दुखद रहेको उनले बताए ।
तर, मृत्यु हुनेहरुको गलत विवरण जिल्ला प्रशासनमा टिपाउने गरिएको गुनासो फिल्डमा खटिएका सिंहले गरे । उनले भने, ‘स्वाइन फ्लु लाग्नेवित्तिकै मानिस मर्दैन, यो औषधि सेवनबाट ठीक हुने समस्या हो ।’
‘तर, ५ वर्ष मुनिका वालबालिका र ६५ वर्ष माथिका वृद्ध वृद्धाहरुमा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुने भएकाले केही खतरा हुन्छ । डाइबिटिज लगायतका रोग लागेकाहरुलाई यसबाट खतरा हुन्छ,’ सिंहले भने, ‘अन्यका लागि यो रुघाखोकी जस्तै हो ।’
स्वाइन फ्लुका संक्रमित न्युन
डा. सिंहले गत आइतबार यता लिम्सा गाउँमा भएको स्वास्थ्यजाँचसम्बन्धी रिपोर्ट समेत अनलाइनखबरलाई टिपाए् । उनका अनुसार सदरमुकाम खलंगाबाट दुई दिन टाढा पर्ने लिम्सामा डा. अच्युत आचार्यको नेतृत्वमा आइतबार ३२ जनाको स्वास्थ्य जाँच गरिएको थियो । टाउको दुख्ने, पखाला लाग्ने बाहेक रुघा लागेका पाँच जनालाई स्वाइन फ्लुको लक्षण देखिएकाले औषधि चलाइएको थियो ।
त्यस्तै सोमबार ७२ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएकोमा १० जनालाई रुघाखोकी देखिएको थियो भने एक जनालाई मात्रै स्वाइन फ्लु लागेको अनुमानका आधारमा औषधि दिइयो ।
मंगलबार ६८ जनाको स्वास्थ्यजाँच गर्दा ८ जनामा रुघा खोकी देखियो भने १ जनालाई मात्रै स्वाइन फ्लुको औषधि दिइयो । त्यस्तै बुधबार १ सय १३ जनाको स्वाथ्य जाँच गरिएकोमा ७ जनामा रुघा खोकी लागेको पाइयो र तीमध्ये ३ जनामा स्वाइन फ्लु लागेको आशंकामा औषधि दिइयो ।
डा. सिंहका अनुसार जिल्लामा स्वाइन फ्लु को ल्याव परीक्षण गर्ने उपकरण नभएकाले आशंकाका आधारमा औषधि दिने गरिएको छ । जिल्लामा औषधिको कुनै अभाव छैन ।
त्यसैगरी नायकबाडामा डा. ज्ञानेन्द्र नेपालीको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेको डा. सिंहले अनलाइनखबरलाई बताए । सोमबार त्यहाँ ९८ जनाको स्वाथ्य जाँच गरिएकोमा ३ जनालाई मात्र स्वाइन फ्लुको औषधि दिइएको थियो ।
मंगलबार १ सय ८९ जनाको स्वास्थ्य जाँच गरिएकोमा ४० जनमा रुखाको लक्षण देखिए पनि एक जनलाई पनि स्वाइन फ्लु नभेटिएको सिंहले जनाए । त्यस्तै जिरी गाउँमा बुधबार ५१ जनाको स्वास्थ्य जाँच गरिएकोमा १० जनामा रुघाखोकी र ३ जनामा स्वाइन फ्लुको लक्षण देखिएको थियो ।
डा. सिंहले जाजरकोटमा महामारी नफैसलिएको दाबी गरे । ‘यहाँ स्वाइन फ्लु त छ तर यसले महामारीको रुप लिएको छैन, सिंहले अनलाइनखबरसँग भने ‘यहाँबाट हामीले मिल्सा, नायकवाडा, रोकाया गाउँ, रामीडाँडा, पयांक र सकला गाउँका मानिसहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरेका छौं ।’
यसरी परीक्षण गरिएका कसैलाई पनि जिल्ला सदरमुकामसम्म सिफारिस गरेर पठाउनु नपरेको सिंहले बताए । उनले भने- ‘एकजना बालकलाई १०४ डिग्री ज्वरो आएको थियो, उनको मैले नै जाँच गरिरहेको छु ।’
डा. सिंहले फिल्डबाट यस्तो दाबी गरे पनि जिल्लामा महामारी फैलिएको भन्दै सरकारले सतर्कता अपनाएको छ । नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरले केही बिरामीहरुलाई उपचारका लागि सदरमुकाममा ल्याएको छ । जिल्लामा दिनहुँजसो कम्तिमा एक जनाको निधन भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले ‘स्वाइन फ्लु’को रोकथामका लागि विदेशबाटै दिए कडा निर्देशन
वीपीपछि भिजन भएका नेता बाबुराम हुन् : रामेश्वर खनाल